Mary Harper: Saaxiibkeeygii Maxamed ee Muqdisho Lagu Dilay? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Farkhigga U dhaxeeya Hogamiye Iyo Maamule. |Tukesomalism.com
Tuke Somalism, March 28, 2016
Mary Harper: Saaxiibkeeygii Maxamed ee Muqdisho Lagu Dilay?
Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu qeexay inay tahay magaalada ugu halista badan caalamka. Laakiin dadka qaar oo halkaas ku sugan waxay isku dayayaan in ay nolosha dib u soo celiyaan. Tifaftiraha BBC ee Afrika Mary Harper oo si joogto ah u booqata Muqdisho ayaa baratay mid ka mid ah dadka ku nool magaalada – wiil si iskiis ah u abuurtay ganacsi oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Sheekh. Ka dibna waxay heshay xaqiiqda.
Mary Harper oo ka qisoonaysa aqoontii ay u lahayd Maxamed Maxamuud Sheekh
Tifaftiraha BBC-da ee Afrika: Saaxiibkeeygii Maxamed ee Muqdisho lagu dilay
Wuxuu sidoo kale dhiirri geliyay dadka kale. wuxuu dhisay bulsho ka kooban dadka jecel in horumarka la sameeyo, wuxuuna noqday qof hammi leh oo ku dayasho mudan. Ganacsiyo fara badan oo si geesinnimo leh loo aasaasay ayaa jiraa, laga billaabo ninka dhallinyarada ah ee mootada ku wareejiya cuntada bisil ilaa gabadha go’aansatay inay noqoto makaaniga baabuurta.
Mar walba waxaan halkaas tagi jiray anigoo ay ila socdaan ilaalo xoog badan – ugu yaraan lix waarddiye oo ku jira hal gaari iyo kuwo kale oo ku jira baabuur kale. Waxaa aad u fiican in aad noqotid qof aan la qiyaasi karin – dadku waxay dhahaan Taleefannada waa la dhageystaa waxaana meel kasta joogaa sirddoon.
Horraantii bishaan, Maxamed wuxuu xilli maalin cad ah gaarigiisa u soo kaxeystay meel amnigeeda aad loo sugo oo lagu magacaabo Kilo mitiri shan. Labo nin oo hubeysan ayaa ku soo baxay wayna toogteen. Wiilkaas oo saameyn weyn ku lahaa bulshada balse aan loo aqoonsaneyn ayaa markii dambe ku geeriyooday isbitaalka.
Ilaa hadda, kuwii dilay gacanta laguma soo dhigin.
Hadda Maxamed uma suurta galeyso in uu rumeeyo riyooyinkii kale ee uu ii sheegay in uu lahaa – ee ahaa in uu furo goob gym ah, xarun ay carruurta ku ciyaaraan iyo in uu ubaxyada uu iibiyo oo idil ku abuuri doono Afgooye, oo aan ka fogeyn Muqdisho. Wuxuu ku riyoonayay in uu cagaar ka dhigo magaalada wuxuu horayba u keenay geedo ubaxyo ah oo uu damcsanaa in uu halkaas ku tallaalo.
Saddex maalmood ka dib geeridiisa, dibadbax dhif iyo naadir ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dad dhallinyaro ah oo madaxa ku soo xirtay tabeebeyaal cad cad ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoo ku dhawaaqaya hal ku dhigyo ay ka mid tahay “Jooji dilka dhallinyarada”. Waxa y is weydiinayeen sababta loo dilay dadka sida Maxamed oo kale ah, islamarkaasna aysan u jirin cid loo soo qabtay falkaas. Isla maalintaas gudeheeda, qarax loo adeegsaday gaari ayaa lala beegsaday afaafka hore ee maqaaxi ku taalla magaalada, waxaana lagu dilay ugu yaraan saddex ruux.
Markii ugu horreysay waxaa arrinta ku dhacday Maxamed ii soo sheegay qof saaxiib ah oo isoo wacay iina sheegay in uu dhintay wiilkii ka soo tagay shaqo ammaan ah oo mushaar fiican oo uu ku heystay Dubai si uu dalkiisa ugu noqdo islamarkaasna u abuuro adeegga makiinadda dharka dhaqda oo aan laga helin Muqdisho muddo ka badan labaatan sanno. Waxaan u maleynayay in arrintaan ay noqoneyso sheeko aad u weyn – oo ay u noqoneyso dadka sida Maxamed oo kale ah oo iyagoo dibadda ku noolaa u soo noqonaya si ay qarankooda dib ugu dhisaan.
Xitaa makiinadda dharka dhaqda ayaa dacwo ah. Mar kasta oo aan u duulo meel ka baxsan Muqdisho, siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa diyaaradda soo raaci jiray iyagoo soo qaaday suudad wasakheysan oo ay doonayaan in ay ku soo dhaqaan dalalka deriska ah. Hadda ka hor mar shir lagu qabtay Hotelka ugu heer sarreeya dalka Itoobiya, waxaan aad ula yaabay markaan arkay siyaasiyiin sar sare oo Soomaali ah oo taagnaa goob iyagoo wada xiran suudad si wanaagsan loogu dhaqay makiinad.
Maxamed wuxuu bartilmaameedsaday fursad ganacsi oo aad u fiican.
Hooyadiis waxay su’aalo iska weydiineysaa oo ay ku jahwareersantahay qalalaasaha ka jira Soomaaliya. Waxay la yaabbantahay cidda wax dileyso iyo cidda la dilayo. Dadku waxay badanaa eedda dusha uga tuuraan Al-shabab oo muddo ka badan 10 sano falal amni darro ka geysaneysay Soomaaliya iyo meelo kaleba. Balse cidda wax dileysa kooxdaas kaliya ma aha.
Maxamed ma uusan ahayn xiddiga kaliya ah ee isagoo soo koraya noloshiisa la soo gaabiyay. Cabbaas Cabdullahi oo ku soo barbaaray xeryaha qaxootiga ayaa sannadkii la soo dhaafay xil wasiirnimo looga magacaabay xukuumadda. Waxaa si kama’ ah toogasho ugu dilay ilaalada xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Dhallinyaro suxufiyiin ah ayaa loo dilaa si joogto ah.
Waxaa wax lala yaabo ah in iyadoo balaayiin lacag ah loo qarash gareynayo in lagu sugo amniga Soomaaliya, oo tobannaan kun oo ciidamo nabada ilaalin ah oo ka socda Afrika ay joogaan dalka, diyaaradaha drones-ka Mareykanka iyo ciidamadooda khaaska ahna ka shaqeeyaan in ay haddana aad u yartahay in la ilaaliyo dadka sida Maxamed oo kale ah. Waxaan mar walba ka fikiraa wiilkaas – saaxiibtinnimadeenni, soo dhaweyntiisi fiicneyd iyo sidii cajiibka ahayd ee uu hamiga ugu hayay sameynta nolol wanaagsan.
Next post Min Xero Qaxooti Illaa iyo Shaambo Samayn - Nolosha Rowdo Axmed
Previous post Wiil Soomaali ah oo Allifay Koronta Xarig La'aan Ku Shaqeyneysa! - Mansh'Allah
Ismaaciil Ibraahim Hassan, November 10, 2019